I-LA Noire ibuyela ku-PS4, i-Xbox One ne-switch ngoNovemba | Izindaba zamagajethi
Kubukeka sengathi izinkampani eziningi zokuthuthukisa umdlalo wamavidiyo zithola umthambo omkhulu wokuthengisa (futhi kungani kungenjalo, kushibhile) ekuqaliseni kabusha imidlalo ebimangalisa ngempela ngesikhathi sabo. Kunjalo Imidlalo yeRockstar ayidedeli inkathi ye- "retro" maqondana nemidlalo yevidiyo.
Sinezindaba ezinhle esingakunika zona, izindaba ezizophinda zihlanganise wonke amapulatifomu, into okunzima ukuyifinyelela namuhla. Futhi yilokho I-LA Noire izofika kuzingxenyekazi eziningi zemidlalo yamavidiyo phakathi nenyanga kaNovemba, futhi okuthile kusitshela ukuthi ngeke ufune ukukugeja.
#LANOIRE: AMAFAYELA E-VR CASE we-HTC VIVE
Okufaka amacala ayi-7 akhe kabusha ngqo iqiniso langempela
Ukuza ngo-Nov 14 https://t.co/YMenbr87AE pic.twitter.com/i2Ts3vhgfr
- I-Rockstar Games (@RockstarGames) September 7, 2017
Umdlalo wafika ngokusemthethweni ezinduduzweni zethu eminyakeni engaphansi kwengu-XNUMX edlule. Kukuziphi izindawo lokhu okungafanele kusho okuningi, kepha sikhuluma ngemidlalo yevidiyo, futhi iminyaka eyisithupha ayifushane ncamashi. Ngalesi sizathu, i-Rockstar Games inqume ukuguqula umdlalo wevidiyo ube ngamapulatifomu amanje asivumela ukuthi sijabulele le ndaba futhi. Ukumemezela ukuthi abafunanga izinto eziningi kakhulu, empeleni kube ngumyalezo olula ku-akhawunti yabo ye-Twitter esemthethweni osebenza njengogwebu, nakanjani i-LA Noire isizofika, futhi izohambisana nezihloko eziningi esizilindile , ngakho-ke izothinta ukunwaya ephaketheni.
Umdlalo wevidiyo uzoza ku-PlayStation 4 naku-Xbox One, kepha izinhlobo ezinamandla kakhulu zalezi ziduduzo zizokwazi ukusakaza ngo-4K. INintendo switchch nayo izowamukela lo mdlalo, yize singazi kahle ukuthi izohambisana kanjani nemidwebo, okungenani ku-switch, kumele sisho ukuthi kwezinye izinhlelo baphawule ngayo. Ngamafuphi, bebengafuni ukukhuluma ngamanani, kepha sicabanga ukuthi kuzoba phakathi kwama-euro angama-30 kuye kwangama-39 futhi kungakuhle ngamafomethi edijithali.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Imidlalo yevidiyo » I-LA Noire ibuyela ku-PS4, i-Xbox One ne-switch ngoNovemba